» कांग्रेसमा २१ दिनपछि नयाँ नेतृत्व
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अबको २१ दिन पछि नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व छान्न १४औं महाधिवेशन २४ देखि २६ मंसिरसम्म काठमाडौंमा हुँदै छ ।
‘विधानमा नै प्रस्ट छ, सभापतिपछिको दोस्रो बढी मत ल्याउने नेताको मात्रै केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुन्छ, बाँकीलाई के गर्ने ? भन्ने विधानमा व्यवस्था छैन । सभापतिले चाहँदा मनोनीत हुने ठाउँ रहन्छ । नत्र त्यो कार्यकालभर केन्द्रीय समिति बाहिरै बस्ने हो,’ नेता मिन विश्वकर्माले भने ।
कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधान भने व्यवहारिक रूपमा निर्वाचित सभापतिले चाहे भने हार्ने उम्मेदवारहरूलाई निगाहामा मनोनीत गरेर केन्द्रीय समितिमा ल्याउन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार त्यो सभापतिको चाहनामा भर पर्छ । विधानमा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन ।
विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सभापतिका लागि मैदानमा उत्रिएकाहरू साँच्चै सभापतिमा भिड्छन् वा ब्याक हुन्छन् भन्ने प्रश्न अब देखिँदै जानेछ । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।
देउवाले पनि बोलाए पदाधिकारीका आकांक्षीको बैठक, उम्मेदवारको टुंगो लाग्ला ?
कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशन : सभापतिमा साझा उम्मेदवार टुंग्याउन संस्थापनइतरको दौडधुप, आज पनि बैठक बस्दै